Madaxweynaha maamulka Puntland oo qirtay in xaalad deganaasho aysan ka jirin P/land,islamarkaana sidii hore xaalka uusan ahayn.. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo qirtay in xaalad deganaasho aysan ka jirin P/land,islamarkaana sidii hore xaalka uusan ahayn..
21st March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas oo maanta dib ugu laabtay magaalada Garowe ka dib markii uu safar dibada uu ku maqnaa ayaa soo laabtay iyadoo dagaalo ay ka holcayaan deegaanada Xeebta maamulka Puntland,waxaana Xilligii uu ka tagayay Puntland ay ahayd mid nabdoon oo wax qal qal amni aysan ka jirin.
C/wali Gaas oo maal mihii u danbeeyay ku sugnaa magaalada Adis-ababa ee dalka Ethiopia xilli dagaalo ba’aan deegaanadiisa ay ka jiraan ayaa hadana waxaa la ogaaday in C/wali itoobiya uu u joogay sidii gacan u weydisan lahaa itoobiya oo lagaga caawin lahaa Shabaabka hororka ah ee ku soo duulay.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo saxaafada kula hadlayay magaalada Garowe ayaa sidii horay looga bartay farxadi aysan ka muuqan wajigiisan,wuxuuna qirtay in Puntland Xilligan ka muuqato qal qal amni,isagoo cadeeyay in markii uu ka tagayay deganaasho ay jirtay,balse haatan sidii hore uu ka duwan yahay.
Wararkii ugu danbeeyay ee naga soo gaarayo Garowe waxay sheegayaan in hada madaxweynaha uu kulumo la leeyahay Labad gole ee xukuumada Puntland,kuwaasi oo lagu lafa gurayo xaalada dagaal ee hadda taagan iyo sida lagu soo afkari karo.